Iibhulethi zokunyuselwa kwebele
Abasetyhini abangenakuvuyela amabele abo bahlala befuna iindlela zokwahlula le ngxaki. Isayensi iye yadala ezininzi iindlela ezinjalo, enye yazo iipilisi zokukhula kwebele. Ngaba la mapilisi asebenza? Omnye unokuthetha ngokuqinisekileyo: ngokwenene bazisa umphumo: bayashintsha ngempumelelo urhulumente, ubukhulu, ukuma, ukunyaniseka kwesifuba. Abafazi bashiya ukuphononongwa ngentshiseko malunga neziyobisi. Babenelisekile kakhulu, befumene ubungakanani besibetho esitsha ngoncedo lweepilisi. Iingcali zincoma ukuthatha ipilisi ngosuku, konke kuxhomekeke kwilisi kunye nomenzi walo.
Ukusetyenziswa kweziyobisi ngolu hlobo kuqhelekileyo eCanada, eUnited Kingdom, e-Australia nase-United States. Iipilisi ezenza utshintsho kumthamo webele, zenze uvakalelo lwangempela! Namhlanje, kukho amalungiselelo amaninzi kwilizwe lethu, kwaye siya kubanceda baqonde ngokuthelekisa iimpawu zabanye. Ezi ziyobisi zihluke omnye komnye ngezindlela ezininzi. Ukongezelela, ukuba bahlukeneyo ngabakhiqizi, bahluke kunye nejubane lefuthe emzimbeni, kunye nesiphumo abanika sona.
Ngokusekelwe kwiinkcukacha ezininzi, sagqiba ekubeni iipilisi zokukhulisa isifuba zisasebenza kwaye zivelisa iinzuzo ezibonakalayo, kodwa kufuneka uqaphele ingcebiso kunye nolwazi olubalulekileyo esiza kubonelela ngezansi kukukunceda ukhethe oko kuya siphumo. Ngendlela, ixesha apho iziphumo zokuqala ziza kubonakala, kunye neziphumo ngokwabo, zixhomekeke ngokuchanekileyo kule nto.
Iipilisi zesifuba sokunyuka kwamaxabiso: isenzo.
Injongo yamacwecwe afana nokuhlaziywa komsebenzi we-mammary gland. Ngenxa yoko, kufumaneka ifom elula kunye ne-elastiki yebele. Iibhilethi ziqulethe izinto zendalo kwi-100%, ngoko ke abanayo imiphumo emibi. Izithako ezingokwemvelo ezibandakanywa ekubunjweni kwamacwecwe-iimpawu ze-estrogenic, nazo zinegalelo ekubuyiselweni komsebenzi we-grey gland. Kule meko, ayichaphazela utshintsho nokuhlaziywa kwezicubu.
Kwiimfumba ezinobumbele zi-receroirs ze-estrogen, izinto ezixhamlayo zeepilisi. Oku kukhokelela ekubeni izinto ezichaphazela ukukhula ziqaliswa kwaye ziphuhliswe kwiifom. Ngenxa yoko - isifuba sithobela imo epheleleyo, iziqulatho zingabonakali kakhulu.
Ekubutsheni, iingxaki ezinjalo zidla ngokuqhelekileyo, kuba ukukhula kwebele kunye nokuphuhliswa kukuchaphazelekayo kwizinto ezahlukahlukeneyo, ezifana nokuhluleka kwe-hormonal, ukungabi nantluko okanye ukungabi ncitshiswa kwamaminerali okanye iivithamini, kwaye oku kubangele umonakalo kumzimba okhulayo. Izinto ezinamathebhulethi zinokuzalisa umzimba wonke kunye nesifuba kunye nemibumba ebalulekileyo yamaminerali. Ndingathanda ukukhumbula ukuba le nkunkuma ayinayo impendulo engathandekiyo, inokusetyenziswa kunye nezinye iziyobisi.
Yintoni ongayifumana: iziphumo.
Ngokusetyenziswa kwezi zonyango uza kufumana:
ukwandisa ukuzithemba kwabo ngokwabo;
ukwandisa ukuqina kwayo;
ukukhululeka kokuya esikhathini;
ukufunyanwa komfanekiso ohlaziyiweyo kunye nomgudu womfazi;
ukwanda ngokwesini kunye ne-libido.
Akunjalo. Zonke iinqununu zeepilisi ezininzi zizinto eziyimvelo, kwaye izinto zendalo aziyi kuba yingozi. Zonke izakhi zinikezelwa ngokwemvelo, azibandakanyi iziphumo zokufakelwa. Uluhlu lwezinto ezinobungozi, ezipapashwe yi-Ofisi yoLawulo lweMilo eMelika, awanalo. Kufuneka silumke malunga neemveliso eziqukethe i-ephedrine, yile nto, kwaye yingozi kakhulu.
Ukuze ungazisoli oko kwenziwe, kufuneka uhlawule ingqalelo imigaqo ethile kunye namanyathelo alula esenzayo xa sivavanya umkhiqizo ngaphambi kokuthenga imveliso yemvelo ukwandisa ukukhula kwebele.
I-TOP-3 isidumbu asibibi ngaphezu kwama-ruble angama-450, eya kwenza i-eyelashes yakho igqibelele!
Ukufezeka akukho mda: indlela yokukhetha ukutshatyalaliswa okulungileyo
Luhlobo luni lokutya olufanele lugcinwe ukuze luphephe i-acne?
IiVithamini ziyimfuneko zeenwele kunye nezipikili
Nciphisa umyeni wakho
Indlela yokujonga ibancinci kuneeminyaka yabo yobudala?
Ukunyamekelwa kancinci kwesikhumba kunye nobuso
Iibhabomethi kunye namaqonkco namajikijolo
Ubhanana ngamanqatha kwiphokoleta
Ukutya ngokusesikweni komntwana
Sigxininisa isidima sethu ngeengubo
Ikhekhe kunye namazambane kunye ne-asparagus
Inkukhu ephekiweyo ne-thyme
Xa iimbilini zisezingeni
I-suitcase enkulu enamagumbi amaninzi
Iipropathi zokuphilisa i-aple cider viniga
Indlela yokuhlobisa ingaphakathi kunye neefoto nezithombe
Amagama ambalwa malunga nobuqili obuncedo
Yintoni onokuyenza ukuba uneminyaka engama-30?
Iipropati ezisetyenziswayo zeDrian
Ikhekhe leSand ne-custard
Ukuqhekeza rhoqo emilenzeni
Ukukhulelwa nokubeletha phesheya